रोशी खहरेपाँगुमा अस्थायी कोभिड अस्पतालको उद्घाटन – Radio Roshi
in रोशी खबर / समाचार / स्थानीय तह / स्वास्थ्य — by Roshikhabar —	November 24, 2020
काभ्रको रोशी गाउँपालिका वडा नं १ खहरेपाँगुमा अस्थायी कोभिड अस्पतालको उद्घाटन भएको छ । रोशी गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा निर्मित उक्त अस्पताल संविधान सभा सदस्य हर्षजित लामा, रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष डि.वि.लामा र उक्त अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तथा उद्घाटन समारोहको सभापति गणेश लामाद्धारा संयुक्त रुपमा उद्घाटन भएको हो ।
कार्यक्रममा सभापति गणेश लामाले “यस भेगका आम नागरिकको स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारे सबैमा अवगत नै छ । कतिपय सुत्केरी महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको उदाहरणलाई हामीले मनन गर्दै अहिले अस्पतालको सुरुवात भएको छ । यसलाई अझै पूर्णता दिन बाँकी नै छ । यस अस्पताल निर्माणको निम्ति सहयोग गर्नुहुने रोशी को १२ ओटै वडालाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु” भने । धेरै समस्याको बाबजुद यस भेगको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा पूरा हुदै गएको कुरा व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी उक्त समारोहको प्रमुख अतिथि तथा संविधान सभा सदस्य हर्षजित लामाले विकास क्रमिक रुपमा भइरहेको र हरेक चुनौतीलाई पार गर्दै आज अस्थायी अस्पतालको उद्घाटन भएको यहि नै पूर्ण नभएको भन्दै आगामी दिनमा आफूले गर्नुपर्ने सहयोग निरन्तर रुपमा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष डि.वि. लामाले अस्पताल निर्माणमा सहयोगिहरुलाई धन्यवाद दिए । “हामीले यो अस्पताल यहाँ स्थापित गर्ने सवालमा धेरै उतारचढाव झेल्यौ । राजनीतिक दल त्यो बेला मात्र थियो जुन बेलामा चुनाव थियो । जब चुनाव सकेर जनप्रतिधिहरु जनताको सेवामा आए त्यसपछि हामी मात्र रोशी दलको रुपमा एकजुट भएर समृद्ध रोशी निर्माणमा अगाडि बढ्यौ” भन्दै उनले “नीति संवत हेर्ने हो भने स्थानीय तहको केन्द्रमा अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने थियो । यो सवालमा रोशी ७ हाम्रो केन्द्र थियो । तर अहिले खहरेपागुमा बनेको छ । जसको निम्ति रोशी ७ को वडा अध्यक्ष र नागरिकहरु धन्यवादको पहिलो पात्र हो भने दोस्रो पात्र रोशीको कार्यपालिका टिम हो ।”
प्रकृतिले दिएको बरदान र रोशी गा.पा.ले दिएको आशिवार्दलाई नागरिकहरुले स्वीकार्न र अस्पताल निर्माणमा अहोरात्र खटिरहेका अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश लामालाई धन्यवाद दिए ।
त्यसैगरी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डम्बरु दाहालले अस्थायी अस्पताल कोभिड अस्पतालको रुपमा स्थापित भएको बताए । “यो अस्थायी अस्पताल भोलीको स्थायी अस्पताल हो । विवादको सवालमा भन्नु पर्दा यो ठाउँमा वस्ती भन्दा पनि अस्पतालको आवश्यकतालाई बुझेर भोलीका दिनमा पनि साथ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु । हामीले गरेको प्रगतिको आधारमा बजेट निकासा हुन्छ” भने । नेपाल सरकारले दिएको डिजाइन अनरुप अस्पताल बन्ने र सो अनुरुप आम नागरिक, जनप्रतिनिधी, कर्मचारी लागि पर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
उक्त अस्पताल रोशी गाउँपालिकाको १० लाख सहयोगमा निर्माण भएको छ । हाल ५ बेडको सुविधा रहेको छ भने २ जना स्टाफ नर्सको नियुक्ति भइसकेको छ । मेडिकल अफिसरको कोटा भने पदपुर्ति गर्न बाँकी नै रहेको छ । समारोहको सभापति गणेश लामा, प्रमुख अतिथि संविधान सभा सदस्य हर्षजित लामा, विशिष्ट अतिथि रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष डि.वि. लामा, उपाध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी वर्तौला, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डम्बरु दाहाल, शिक्षाप्रेमी गणेशमान लामा, अमित लामा लगायत वडा अध्यक्षहरुको आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्घोषण भने गणबहादुर लामाले गरेका थिए ।